Sidee ku kasban kartaa qofka aad jeceshahay qalbigiisa Arimaha Bulshada | Somali music, lyrics, songs, mp3 Warwad
Sidee ku kasban kartaa qofka aad jeceshahay qalbigiisa
Ugu horeen ma jirto waddo toosan oo qofka aad ka dhigi karto inoo ku jeclaado, laakiin waxaa jirto talooyin kaa saacidaayo in qofka ku jeclaado… waxaan jecelnahay maqaalkan in aan arintaa ku faafaahino.
1. Ahow qof isku kalsoonaado., isku kalsoonida qofka waa wada ugu fiican ee ka dhigto qofka inoo yahay qof sareeyo,.
* Ha noqon qof isla wayn, laakiin marwalbo halka aad ka hooseeso ha soo bandhigin, waxaad qofka kale tuseesaa inaadan waxba uhaynin oo kugu raaco, sidaas awgeed marwalboa ahow qof isku kalsoon, soona bandhiga waxa ooo ku sareeyo.(adigoo xaqiiqda sheegayo)
* Ha is bar bardhigay qof kale, sababtoo ah si walbo aad ufiicantahay waxaajiro qof kaa fiican kaana jacayl wanaagsan. kaliya ahow qofka soo sharaxa waxay uu haysto ha noqon qof sharaxa waxa dadka kale haystaan..
2. u Dhoola caday. Dhoola cadaynta waxa ee gudbineesaa fariin ah in aad qofka danayneeso iyo wanaag wajigaaga oo muujinaayo inaad qofka kale wanaag uqabto kaliya wajigaaga ayaa gudbinaayo intaas oo shay..
3. is daji kulanka aad la kulanto Ha noqon qof soo bandhiga isla markiiba, hana noqon qof qariya wax walbo oo aanan wax dan kalahayn, adigoon sidaa sameenin baa tusi kartaa qofka inaad daneeneeso.
* ka baxi faaalo waxa uu wato ama xaaladaasa waxa ku suganyahay ( waw shayga waa qurux badanyahay.)
* Tusi la’aanta qofkaba inaad tahay qof faraxsan adoon ugu sheekeenaayo waxa aad qabatay sida filim qatar aad fiirsatay iyo waxyaabo lamid ah.
* Marka aad wax yar hadashaan usheeg inaad baxi rabto aad la kulmi rabto saaxib aad leedahay ama inaad balan kale leedahay, sidaasi waxaad ku tuseesaa inuusan ahayn qof kaliya aad sugaysay.
Maqaalka qeebtiisa labaad waaan soo qoreenaa waana maqaaal dheer